Compote of izithelo ezomisiwe - isiphuzo yendabuko eRussia kanye namazwe amaningi aseMpumalanga Yurophu. Ezinsukwini ubudala, igama elithi "isiphuzo" lizama nje ketshezi ngenjongo yokuphuza, kodwa esebenzisa "ukugcwaliswa." Lokho "bazogcwalisa" lase iyisitshulu kwasekuqaleni, kunokuba nje zicime ukoma kwazo.
Kulesi sihloko, sizokhuluma uthole ukuthi ukulungiselela kahle compote of izithelo ezomisiwe, ukuthi kuyavumelana ngokuphelele nalo welithi "isiphuzo" futhi kwaba okunomsoco, esihlwabusayo futhi unempilo.
izithelo iyisitshulu aqukethe amanani abalulekile amavithamini, okuyizinto ezibalulekile ikakhulukazi entwasahlobo. Isidingo entwasahlobo ngoba izakhamzimba inyuka, ngoba izinzipho babe ziyaqothuka, fade izinwele, futhi isikhumba peels off.
Inzuzo enkulu compote of izithelo ezomisiwe wukuthi zonke izakhi kuwo, odabuka yemvelo, hhayi "ekheniwe", wadala egunjini lokucwaninga esibhedlela. Ngokungafani izithelo ezisanda kukhiwa, le dessert isiphuzo sweet ngempela ashibhe. Futhi ngaphandle ukuthi simnandi kakhulu futhi kulula ukulungiselela futhi izindlela ukupheka ke, kunezindlela eziningi.
izithelo iyisitshulu simele umhluzi kusuka izithelo ezomisiwe kanye amajikijolo (ngokuzikhethela fresh) isiraphu. Ngokuvamile lezi zithelo zisetshenziselwa ukwenza lokhu isiphuzo emangalisayo: apula, amabhilikosi, amagonandoda, amagilebhisi, asithena, amabhilikosi omisiwe noma amabhilikosi omisiwe. Iningi lazo zitholakala kalula ezitolo noma izimakethe. Ungase futhi uthathe amajingijolo, raspberry, cranberry, mountain ash futhi zasendle rose. Nakuba lezi amajikijolo kutholakala ukuthi kancane more xaka, kodwa izinga ukunambitheka compotes wathola ngeke abashiye ubani nandaba.
Ezinye izinhlobo zidinga lemon compote (noma citric acid), itiye (izithelo elimnandi ngaphezulu), uhlobo lwembali enephunga elimnandi (izinongo ukunikeza isiphuzo), lemon namafutha, futhi-ke, ushukela. Futhi uma sifaka izithelo kancane isitashi - uthole jelly esihlwabusayo. Kodwa sizokhuluma ngalokho ngokuzayo.
Compote izithelo omisiwe ine ukunambitheka omuhle kakhulu futhi ukoma kakhulu quencher. It akunakubangelwa ngokuyinhloko iziphuzo ezibandayo, kodwa hhayi ukudla. Yiqiniso, Iziphungo Izithelo ezintsha kanye kuphekwe ngokushesha, futhi akukho ngaphansi ewusizo, futhi mhlawumbe inani kilojoule, kodwa ukuze ome izithelo okusezingeni eliphezulu e amavithamini namaminerali ezaziwayo. Futhi, naphezu kweqiniso lokuthi okunama-kilojoule amaningi izithelo compote ezinjalo, nguye Ngabamba kakhulu. Njengoba wonke ama-calories yakhe ayikwazi chasiselwe "ezingenalutho".
By the way, efana compotes kanye abadala kanye nezingane. Compote of izithelo ezomisiwe izinsana upheka omama kakhulu, ngoba ukwazi izinzuzo zayo. It ibhalwe kalula. Kumelwe sithathe izithelo omisiwe (pre-wageza), enezele ebhodweni. Banezela kwengcosana kashukela, amanzi ngamathumba futhi agqoke emlilweni ophansi. Uma abilayo, ibhodwe kumelwe asuswe ukushisa wasiqashisa phisa compote amahora ambalwa. I isiphuzo ilungele ukusetshenziswa. Kungaba anikele izingane kanye Kiddies sezikhulile.
Ngakho, indlela ukupheka izithelo iyisitshulu ngomntwana saqonda, manje sifuna zidlule omunye iresiphi ukupheka umhluzi okumnandi.
Kukhona ekhethekile iresiphi compote of izithelo ezomisiwe, okuvumela ukuba kuzuzwe ukunambitheka acebile. Ayikho into elukhuni ngakho akuyona nje ekuwulungiseleleni kuthatha ithuba elengeziwe. Futhi namanje kudingeka banamathele olinganise ecacisiwe imikhiqizo. Kodwa umphumela nakanjani ukujabulisa wena nekhaya lakho.
izithelo omisiwe - 200-250 amagremu;
Water - 100 amagremu;
Ekuqaleni, kudingeka ngokucophelela lungisa futhi ugeze izithelo ezomisiwe. Khona-ke uwafake embizeni, uthele amanzi ashisayo, ushukela, citric acid. Beka i-pan phezu komlilo futhi unike ngamathumba ke cisha, amboze futhi ushiye sokunika amahora 1-1.5.
Emva kwalesi sikhathi, i-compote futhi wabeka phezu kwesitofu futhi imenze a 2nd isikhathi abilayo. Ngemva kwalokho, waphinda ngibambe 1-1.5 Infuse. Compote izithelo omisiwe angabhekwa ngomumo ngemuva kwamahora 10-12.
Non-utshwala ubhiya: brand ukuthi bayakufanelekela benaka
Buka Amakhasi "VKontakte" ivaliwe. Kanjani ukuze uvule ikhasi avaliwe?